प्रचण्ड–नेपालको भेलाले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने ! : RajdhaniDaily.com
HomeEditor-Picksप्रचण्ड–नेपालको भेलाले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने !
काठमाडौं । नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षधर केन्द्रीय कमिटी बैठक कार्की बेन्क्वेट बबरमहलमा सुरु भएको छ ।
आजको भेलाले पार्टी अध्यक्षबाट केपी ओलीलाई हटाउने सम्भावना छ ।